Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka “Waxaan Soodhaweynayaa ansixinta Golaha adeegga Garsoorka”
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo ka hadlaya ansixinta Golaha adeegga Garsoorka ayaa yiri “Waxaan so dhaweynayaa ansixinta maanta ee Golaha adeegga Garsoorka ee Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Golahu wuxuu u xilsaaran yahay maamulidda howlaha garsoorka iyo damaanad qaadidda madaxbannaanida Garsoorka Dalka”.
Xeer-ilaaliyihu wuxuu intaas ku daray “Sidoo kale, Golaha Adeegga Garsoorka wuxuu u xilsaaran-yahay soo jeedinta, magacaabidda, anshax-marinta iyo bedelaadda xubnaha garsoorka dalka si loo xaqiijiyo dalku in uu yeesho garsoor wax ku ool ah, daah-furan oo loo siman yahay”.
Ugu danbayntii xeer-ilaaliye sulaymaan ayaa sheegay in loo baahan-yahay in la dhameeyo howlaha u dhiman Golaha adeegga Garsoorka Dalka “Madaxda Garsoorka Dalka gaar ahaan xeer- ilaaliyaha guud ee Qaranku waxaa uu ugu mahad-celinayaa Wasiirka wasaaradda Caddaalada dadaalka dheeriga ah ee uu ku bixiyey horgaynta Golaha Adeegga Golaha shacabka si loo ansixiyo. Wasiirka iyo madaxda kale ee qaranka, waxaan ka rajaynayaa in ay dardar-galiyaan hawlaha u dhiman golaha garsoorka”.